ဘုန်းကျော်: ဗိုလ်မှုးအောင်လင်းထွတ်က ထောက်လှမ်းရေးရှေ့ နေလား?????
ဗိုလ်မှုးအောင်လင်းထွတ်က ထောက်လှမ်းရေးရှေ့ နေလား?????
၁၂၊ ၁၁၊ ၂၀၁၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း ဘီဘီစီကို နားထောင်ဖြစ်တော့ ကိုရင်မောင် က ဦးဌးအောင် (NDD) နဲ့ ဗိုလ်မှုးဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွတ်ကို အင်တာဗျူးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဦးအောင်လင်းထွတ်ပြောတာကို ကျနော်သံသယဖြစ်မိလို့ ဒီလိုရေးမိပါတယ်။ အားလုံးစဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့။ ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနတွေကို နားထောင်တဲ့မြန်မာတွေက မြန်မာပြည်လူဦးရေရဲ့ လေးပုံပုံရင် နှစ်ပုံလောက်ရှိနိုင်တယ်။ ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနတွေအနေနဲ့ သတိထားကြဖို့ ဒီလိုရေးပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချီရေးပုံစံလိုဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်မိတယ်။ ခုတုံးလုပ်ခံရပြီး ပြည်သူလူထုကိုေ၀၀ါသွားအောင် မလုပ်မိဖို့ပါ။
ဦးအောင်လင်းထွတ်ကအမြဲတမ်းပြောတယ်။ တပ်ကို အဓိကအမိန့်ပေးတာ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေပေါတဲ့။ သူပဲ အဓိက စီစဉ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ ထားတော့ တပ်က ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်က အမိန့်ပေးတော့ အောက်ကလူတွေလည်း လုပ်ရမှာပေါ့။ ဒါက ထုံးစံပဲ။ ဒီနေရာမှာ မေးချင်တာက...အရာအားလုံးကို ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးတစ်ဦးထဲကပဲ လုပ်တာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲ။
ဦးခင်ညွှန့်၊ ဦးတင်ဦး အပါအ၀င် အခြားစစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ခေါင်း,မရှိတော့ဘူးလား။ သူတို့က ဘာအမှားမှ မလုပ်ခဲ့ဘူးလား။
သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုကြတော့ ဘာ့ကြောင့် ဦးအောင်လင်းထွတ်မပြောလဲ။ တချိန်လုံး ဦးသန်းရွှေပဲ အပြစ်ပုံချတာတော့ မရိုးသားဘူး။ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုကြတော့ ဘယ်နှစ်ခါဝန်ခံခဲ့ဘူးလဲ။ ဥပမာ ဦးခင်ညွှန့်က ၈၈-မှာ ခိုင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စ။ ကျောင်းသားတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို သတ်ခဲ့ကိစ္စ၊ ရေကြည်အိုင်မှာ သတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စ...စသဖြင့်စသဖြင့်...အများကြီးပါ။ ဒါတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးတဦးတည်း ဖင်ယားပြီး လုပ်ခဲ့တာလား။
ကျနော်အမြင်ကတော့ ဦးအောင်လင်းထွတ်အခုပြောနေတဲ့ပုံစံက တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ခဲ့လူဟာ ဦးသန်းရွှေတစ်ဦးတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဖြစ်နေပြီ။ အပြစ်တွေအားလုံးကို သေခါနီးအဖိုးကြီးကိုပဲ အပစ်ပုံချနေသလိုဖြစ်နေပြီ။ ကျန်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက သူတော်ကောင်းကြီးတွေလားဆိုတာ ပြောပါအုံး။ ဗိုလ်မှုးအောင်လင်းထွတ်ကော ဘယ်နှစ်ခါ အမှားနဲ့ကင်းဖူးသလဲ။ ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်တစ်ဦးလား။
ယနေ့လို့ကာလမှာ ဒီလိုစကားမျိုးတွေ ခဏခဏ ထပ်ခါထပ်ခါကြားနေရတယ်။ နားထောင်တဲ့လူတွေထဲမှာ လူမျိုးစုံပါတယ်။ ဗဟုသုတအနိမ့်အမြင့်ရှိနိုင်တယ်။ ဆိုတော့ အခု ဦးအောင်လင်းထွတ်က မီဒီယာကို အသုံးပြုပြီး ကျန်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေအပြစ်က လွှတ်အောင် ဘေးကနေ ကြပ်ပေးသလိုဖြစ်နေပြီ။
မဟုတ်ရင်တော့ စစ်ထောက်လှမ်ရေးကို ကိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးဟာ သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ ရှေ့ နေအနေနဲ့ပြောတာလို့ယူဆရမှာပဲ။
နိဂုံးကတော့ ဦးသန်းရွှေက တပ်ထဲကလူတွေအားလုံး တနေ့ချီးသုံးခါစားဆိုရင် အားလုံးဝိုင်းစားကြမှာလား။ ဆိုတော့ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ခဲ့တာ ဦးသန်းရွှေတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး။ အမိန်ပေးသူ၊ အမိန့်နာခံသူ၊ ကူညီသူအားလုံးအားလုံးပါဝင်တယ်လို့ ကျနော်တော့ပြောချင်တယ်။ ဦးအောင်လင်းထွတ်လည်း ပါခဲ့တာပဲ။ အရင်က လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ်ကမှားခဲ့ပါတယ်လို့ ၀န်ခံသူ၊ တောင်းပန်သူကိုတော့ ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။
သို့မဟုတ်ရင်တော့ ဦးအောင်လင်းထွတ်ကို ဘယ်လို့ပြောရမလဲ....
မီဒီယာအားလုံးခင်ဗျား... ဒီအမှုက ပေါ့သေးသေးမဟုတ်တာကို သတိထားကြပါ။ တိုင်းပြည်ကိုဖျက်တဲ့အထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းက လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ မေးရင်လည်း ဘက်နှစ်ဖက်၊ သုံးဖက်အမြင်ကို တင်ပြကြပါ...။ နံပါတ်ဝမ်းလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့မရပါဘူး။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, November 12, 2010
Aung Lin Htut always cover his master father in law Khin Nyunt.He never say about his MI gaing.Khin Nyunt is U Nay Win"s pet.U Nay Win used him as gasterpo to control the army and generals.When U Nay Win fevoured him,he care nobody.When U Nay win was arrest,he knew that next time would be his turn.He spreaded the news that he love democracy,he is soft not like the others.He tried to get power but his Mi gaing has just pistol,no tanks.He is the most responsible for killing,torture the politicans.
ဒေါ်စု လွှတ်လွှတ်ခြင်း သံတမန်တွေနဲ့ အာ,နေပြီ
ဗိုလ်မှုးအောင်လင်းထွတ်က ထောက်လှမ်းရေးရှေ့ နေလား???...